धनिया स्वादका लागि मात्र होइन यी रोगको औषधि पनि हो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने धनिया स्वादका लागि मात्रै नभएर स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । धनियाले विभिन्न रोगको औषधिको रुपमा समेत काम गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।धनियाले भोक नलाग्ने मान्छेलाई भोग जगाउँछ ।
यसमा एन्टी माइक्रोवियल, एन्टी अक्सिेडन्ट, एन्टी डिस्लिपिडेमिक लगायतका औषधीय गुण हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हरियो धनिया मात्र नभएर पाकेको धनियाको बियाँ खानु पनि मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टोरल नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।
हरियो धनियामा भिटामिन सी, भिटामिन के, खनिज पदार्थ र प्रोटिन जस्ता पोषक तत्वहरु पाइने हुँदा यो स्वादका लागि भन्दा पनि औषधिका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण सावित हुन्छ ।
त्यस्तै, धनियाको बियाको तेलमा पाइने लिनालोल तत्वले दुखाइ कम गर्ने र जीवाणुलाई मार्ने गुण हुन्छ ।
दुधमा तुलसी मिसाएर खानुको फाइदै फाइदा !
दम रोग : यदि तपाईलाई स्वासप्रस्वाससम्बन्धि समस्या छ या दम छ भने दूधमा तुलसीको पात हालेर उमालेर खानुस् । यसले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
Prevतुलसीको सेवनले दिलाउँछ फ्लू र भाइरसबाट छुट्कारा ! यसरी प्रयोग गर्नुहोस् ।(बिधि सहित)
Nextबिचौलियाको कब्जामा मेगा बैंक, हिरा’सतमा रहेका ग्राहकको हस्ताक्षरमा करोडौं साफ…हेर्नुहोस् ।
पढेको बिर्सनु हुन्छ भने यो पढ्नुहोस् ! अर्पण शर्माको १० टिप्सहरु…सेयर पनि गर्नुहोला ।